Dowladda Mareykanka ayaa Badashay Ciyaartii EV.
Kacaankii EV ayaa durba socda, laakiin waxaa laga yaabaa inay hadda uun soo martay xilli -biyoodkeeda. Maamulka Biden wuxuu ku dhawaaqay bartilmaameedka gawaarida korontada si ay u noqdaan 50% dhammaan iibinta gawaarida ee Mareykanka marka la gaaro 2030 horaantii Khamiista. Taas waxaa ka mid ah batteriga, isku-darka isku-dhafan iyo gawaarida korontada unugyada shidaalka ...
Waa maxay OCPP & Maxay Muhiim ugu tahay Qaadashada Baabuurka Korontada?
Saldhigyada lacag -bixinta ee korontada waa tiknoolajiyad soo baxaysa. Sidan oo kale, martigaliyayaasha goobta saldhigga lacag -bixinta iyo darawalada EV waxay si dhakhso leh u baranayaan dhammaan erey -bixinnada kala duwan iyo fikradaha. Tusaale ahaan, J1772 jaleecada hore waxay u ekaan kartaa isku xigxiga xarfaha iyo tirooyinka. Sidaas ma aha. Waqti ka dib, J1772 wil ...
Waa Maxay Waxyaabaha Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Markaad Iibsanayso Charger EV -ka Guriga
Home EV Charger waa dheelitir waxtar leh si loo siiyo baabuurkaaga korontada ah. Waa kuwan shanta arrimood ee ugu sarreeya oo la tixgeliyo marka aad iibsaneyso Charger EV Home. NO.1 Muhiimka Goobta Muhiimka ah Markaad doonayso inaad ku rakibto Home EV Charger dibedda, halkaas oo ay aad uga yar tahay waxyaabaha laga ilaaliyo, waa inaad bixisaa ...
USA: Eedaynta EV waxay ku heli doontaa $ 7.5B Hindise Sharciyeedka Kaabayaasha
Ka dib bilooyin qalalaase ah, Golaha Guurtida ayaa ugu dambayntii yimid heshiis kaabayaal laba geesood ah. Sharciga ayaa la filayaa inuu qiimihiisu ka badan yahay $ 1 tiriliyan siddeed sano, oo lagu daray heshiiska lagu heshiiyay waa $ 7.5 bilyan si loogu madadaasho kaabayaasha korontada ee korontada. Si gaar ah, $ 7.5 bilyan ayaa t ...
Joint Tech waxay ka takhalustay Shahaadada ETL ee ugu horreysay ee Suuqa Waqooyiga Ameerika
Waa guul aad u weyn in Joint Tech ay heshay Shahaadada ETL ee ugu horreysay ee Suuqa Waqooyiga Ameerika ee ku yaal dhul -weynaha Shiinaha EV Charger field.
GRIDSERVE waxay daaha ka qaadaysaa qorshayaasha Wadada Korontada
GRIDSERVE ayaa shaaca ka qaaday qorshayaasheeda ku aaddan beddelidda kaabayaasha korontada (EV) ee ku shaqeeya UK, waxayna si rasmi ah u bilowday GRIDSERVE Highway Electric. Tani waxay ku lug yeelan doontaa shabakad guud ahaan Boqortooyada Midowday oo ka badan 50 awood sare '' Electric Hubs '' oo leh 6-12 x 350kW mid kasta, oo lagu daray ku dhawaad ​​300 rapi ...
Volkswagen waxay bixisaa baabuur koronto si ay uga caawiso jasiiradda Giriigga inay cagaar noqoto
ATHENS, June 2 (Reuters) - Volkswagen ayaa siddeed baabuur oo koronto ah u dhiibtay Astypalea Arbacadii talaabadii ugu horaysay ee ay u rogtay gaadiidkii jasiiradda Giriigga, kaas oo ah qaab ay dawladdu rajaynayso inay ku fidiso dalka intiisa kale. Raiisel wasaare Kyriakos Mitsotakis, oo sameeyay cagaar cagaaran ...
Kaabayaasha lacag -bixinta ee Colorado waxay u baahan yihiin inay gaaraan yoolalka baabuurta korontada
Daraasadani waxay falanqaynaysaa tirada, nooca, iyo qaybinta xeedhoyaasha EV ee loo baahan yahay si loo buuxiyo yoolalka iibinta baabuurta korontada ee 2030 ee Colorado. Waxay qiyaasaysaa baahiyaha dadweynaha, goobta shaqada, iyo xeedhaha guriga ee baabuurta rakaabka ee heer degmo waxayna qiyaastaa kharashyada si loo daboolo baahiyahan kaabayaasha. Ku ...
Sida lacag looga qaado baabuurkaaga korontada ah
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ku dallacdo baabuurka korontada waa godka guriga ama shaqada. Intaa waxaa dheer, bateriyada degdegga ah oo aad u sii kordhaya ayaa siinaya shabakad badbaado kuwa u baahan buuxinta awoodda degdegga ah. Waxaa jira tiro ikhtiyaarro ah oo lagu dallaco baabuurka korontada guriga dibaddiisa ama markaad safraysid. Labadaba AC fudud ...
Waa maxay Mode 1, 2, 3 iyo 4?
Heerka lacag -bixinta, lacag -qaadistu waxay u qaybsantaa hab la yiraahdo "hab", tanina waxay sharraxaysaa, iyo waxyaabo kale, heerka tallaabooyinka badbaadada inta lagu jiro lacag -bixinta. Qaabka lacag -u -qaadidda - HABKA - marka la soo gaabiyo wuxuu wax ka sheegaa amniga inta lagu guda jiro lacag -bixinta. Ingiriisiga kuwan waxaa loogu yeeraa lacag -bixinta ...
ABB wuxuu dhisi doonaa 120 saldhig oo DC DC ah oo ku shaqeeya Thailand
ABB ayaa qandaraas ka heshay Hay'adda Korontada ee Gobolka (PEA) ee Thailand si ay u rakibto in ka badan 120 saldhig oo degdeg u dallaca baabuurta korontada ee waddanka oo dhan dhammaadka sannadkan. Kuwani waxay noqon doonaan 50 kW tiir. Gaar ahaan, 124 cutub oo ka mid ah saldhigga degdegga ah ee Terra 54 ee ABB ayaa la geyn doonaa ...
Qodobbada lacag -bixinta ee LDVs waxay ballaarinayaan in ka badan 200 milyan waxayna ku siinayaan 550 TWh Muuqaalka Horumarinta Joogtada ah
EVs -ku waxay u baahan yihiin marin u helidda dhibcaha lacag -bixinta, laakiin nooca iyo meesha ay ku jiraan xeedhoduhu ma aha mid gaar u ah milkiilayaasha EV. Isbeddelka farsamada, siyaasadda dawladda, qorshaynta magaalada iyo korontada ayaa dhammaantood door ku leh kaabayaasha lacag -bixinta ee EV. Goobta, qaybinta iyo noocyada vehi korontada ...